Monday, May 20, 2013 Wakhtiga Geeska Afrika 11:58
Maleeshiyada Al-ShabaabxMaleeshiyada Al-Shabaab
Ururka AL-Shabab ayaa lagu jebiyey iska horimaadyada milatari ee ay la galeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya. Kismaayo iyo garoonka Ballidoogle ayaa ugu dmabeeyey meelaha laga qabsaday ururka Al-Shabab.
Haddaba maxaa horseeday guuldarrooyinkan milatari ee soo foodsaaray ururka? Maxaa saamayn ah ee ay ku yeelan karaan fikirka ay ku socdaan ururka Takfiiriga ah?
Waa modwuuca Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana ka qaybgalaya Prof. Cabdiraxmaan Macalim Baadiyow oo ka mid ahaa musharrixiinta ka qaybgashay tartanka madaxweynenimada; Maxamed Al-Amin Al-Haadi oo ah Agaasimaha Xarunta Warbaahinta iyo Daraasaadka ee As-Shaahid, iyo Qoraaga Faysal Cabdi Rooble.